एक पुलिस राज्य मा तपाईं पुलिस को चित्रण मा "" मद्दत "प्रदायकहरु मा प्रतिबन्ध चाहान्नुहुन्छ: मार्टिन Vrijland
सदस्यहरूको लागि अतिरिक्त
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	6 डिसेम्बर 2019 मा	•9टिप्पणिहरु
चिनियाँ प्रान्त सिinkसिiangमा युगर्स भनिने जनस group्ख्या रहेको छ। तिनीहरू सामान्यतया स्वभावले मुस्लिम छन् र चिनियाँ राज्यले यसलाई भिन्नै रूपमा हेर्न रुचाउँदछ। हामीले देखेका छविहरू दot्गाई जनसंख्या र आतंकवादी समूहको हुन् जसको फोटो र भिडियोहरू IS जस्ता धेरै मिल्दोजुल्दो छ। अब यो तथ्यलाई सामना गर्ने समय आयो कि अरू जस्तो सरकारले आफ्नै आत terrorist्ककारी समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्तैन र आफैले पनि बीमाको व्यवस्था गर्न सक्छ। तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, विद्रोहहरूलाई व्यवस्थित गर्न कि तपाईंलाई कडा हस्तक्षेप गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
ह Hongक Kongमा भएका विरोधहरू चिनियाँ सरकारले जोडदार ढंगले हस्तक्षेप गर्न र उइगुर शैलीमा पुलिस राज्य स्थापना गर्न सक्षम हुनु एउटा उत्कृष्ट अलीबी हो। यस अवस्थामा उनीहरू मुस्लिम आतंकवादी होइनन्, तर यो अमेरिकालाई देखाउन सकिन्छ जसले ह Hongक Kongको सडकमा प्रदर्शनकारीहरूको बीचमा घुसपैठ गर्ने थियो। तिनीहरू जो सोच्छन् कि विश्व स्तर मा अझै पनि दुश्मनहरू छन्, केवल त्यस धारणालाई जहाजमा हाल्नुहोस्। सबै देशहरू मिलेर पुलिस राज्य शुरू गर्न को लागी काम गर्दछन्। युरोप र अमेरिकामा यो शरणार्थी बन्न सम्भव छ तल IS सम्भव छ लडाकूहरु संग, ह Hongक Kong मा यो अमेरिकी घुसपैठाहरु छ, सिinkसिiang्ग प्रान्तमा यो मुस्लिम थियो। कडा हस्तक्षेप एक इच्छित परिणाम हो, आतंकवाद वा रंगीन क्रान्तिहरू (सीआईए जीन शार्प विधि) यसको लागि मार्ग हो।
मेरो नयाँ पुस्तकमा पढ्नुहोस् कि कसरी सबै देशहरू एकै साथ विश्वव्यापी रूपमा पर्दा पछाडि उही मास्टर स्क्रिप्टमा काम गर्दछन्।
त्यसोभए यदि तपाईंले तलको वृत्तचित्र हेर्नुभयो भने, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि यो मुख्यतया चीनमा खराब अवस्था कसरी रहेको छ भनेर औंल्याइएको छ, तर हामी यो तथ्यलाई वेवास्ता गर्दछौं कि हामी पश्चिममा पनि त्यस्तै पुलिस राज्यतर्फ अघि बढिरहेका छौं। ढिलो सडक भनेको आतंकको खतरा र बढ्दो अपराधको रूपमा थियो (रूप मा प्रोक्सी अपराध जस्तै मोक्रो माफिया र हत्यारा हेइनकेन अपहरणकर्ताहरूको रूपमा)। त्यससँग तपाईं सबै प्रकारका कानूनहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ जुन सामान्यतया अकल्पनीय हुन्छ, तर आवश्यकता आफैं सिर्जना गरेर तपाईले जनताको स्वीकृति मोड बढाउनुहुन्छ। विलेम होलीडरको अभिनय कार्यका लागि धन्यबाद, अब हामीसंग एउटा कानून छ जसले सबैलाई सम्भव छ कि यो अपराधको दोष दिन सक्छ र मुकुटको गवाहीले "प्रमाणित" गर्दछ। वकिलहरूलाई शिकारको रूपमा राखेर, तपाईं त्यो समूहलाई अजीव बनाउन सक्नुहुन्छ। राज्यको प्रचार पत्रकारहरूसँग पनि त्यस्तै भएको छ। विस्तृत विवरणका लागि निलो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
यद्यपि पुलिस राज्यलाई किक स्टार्ट दिन तपाईलाई सामाजिक अशान्ति चाहिन्छ। फ्रान्स मा जुन पहिल्यै पहेंलो निहितको साथ धेरै सफल छ। EU देशहरू मध्ये एकबाट केही सिपाहीहरू भर्ती गर्न र नागरिक पोशाकमा तिनीहरूलाई फहराउनको लागि यि सजीलो छ कि उनीहरूलाई पहेंलो वस्त्रले दंगा दिन्छ। इ England्ल्यान्ड र नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरूको लागि राम्रो किकस्टार्ट एक स and्कट र शरणार्थीहरूको धाराको संयोजन हो। सबै फ्यूजहरू बिभिन्न पाउडर केगमा छन्। टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगान युरोपेली साझेदारहरूसँग केही हदसम्म अधीर हुन्छन् किनभने उनीहरूले शरणार्थी स्वागतको लागि आर्थिक सहयोग गर्दैनन् र ईयूमा प्रवेशसमेत गर्दैनन्। उसले केवल शरणार्थी ट्याप खोल्नु पर्छ र यहाँ। ब्रेक्सिट गिरावट अर्थतन्त्रको पाउडर क्यागमा सम्भावित विक हो; अर्कोमा आर्थिक प्रहार त्यो अमेरिकाबाट उड्नेछ।
यदि अर्थव्यवस्था पतन हुन्छ र दक्षिणपन्थी राजनीतिक शिविरमा दोष लाग्छ भने, तपाईंले महान अराजकताको लागि जग बसाल्नुभयो। त्यो अराजकताबाट कडा हस्तक्षेप गर्न धेरै सजिलो छ। Hyped जलवायु संकट को माध्यम बाट अतिरिक्त अतिरिक्त alibi हालका वर्षहरुमा निर्माण गरिएको छ। विश्व 12 वर्ष भित्र समाप्त हुन्छ भन्ने डर युएन एजेन्डा 2030 मा निर्बाध रुपमा फिट हुन्छ। यी जलवायु उपायहरूले कडा सर्वंकवादी शासनको लागि आह्वानलाई सुदृढ तुल्याउनेछ र ए टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट तानाशाही (अवश्य पनि प्रजातन्त्रको आवरणमा)। तपाईलाई पढ्नुहोस् यो लेख फेरि कि विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न।
हाम्रो देश क्यामेराले भरिएको छ। कानून "साइकोसिस" वा "भ्रमित" को बहानामा समाजबाट सबै असन्तुष्टिहरू हटाउनको लागि तयार छ। को मनोविज्ञान ड्राइभ गर्न र मानिसहरूलाई "केयर" क्याम्पमा लैजान तयार छन्। तपाईं तलको भिडियोमा 'प्रशिक्षण' भन्ने कुरासँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरू विश्वास गर्छन् कि जलवायु वा ईयूको बिरूद्धमा कुनै गलत कुरा छैन (जो त्यसबेलाको आर्थिक मन्दीका लागि जिम्मेवार हुन सक्ने दायाँ-पागल पागलहरू) भ्रमबाट ग्रसित छन् र सावधानीको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्दछ। फेरि होइन psychotic बन्नु र तपाइँ पुलिस वा मनोविज्ञानको "सामाजिक कार्यकर्ताहरू" बोल्ने आँट गर्दैनन् फिल्ममा जब विपक्षी असमान हटाईन्छ।
मानिसहरू जो डराउँछन् कि उनीहरू पक्राउ पर्नेछन् तिनीहरूलाई पीडा हुन सक्छ र उनीहरूलाई रोकथाम उपचारको आवश्यक पर्दछ। जे भए पनि, हामीले मौसम बचत गर्नुपर्दछ।
हामी धेरै डरलाग्दो र धेरै चिनियाँ मोडेल पुलिस राज्यमा परिचित भएका छौं। अमेरिकी (एफईडी) र यूरोपीयन केन्द्रीय बैंकले यस बीच ठूलो कम्पनीहरूले झन्डै शून्य ब्याजमा मुद्रित पैसा दिएर साम्यवादको तयारी गरेका छन ताकि उनीहरूले आफ्नै सेयर किन्न सकून्। यसले शेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा उच्च राखेको छ। ट्रम्पको असफल व्यापार युद्ध र ब्रेक्सिटको अवरोधको माध्यमबाट आर्थिक संकटलाई सहीको जुत्ताहरूमा धकेल्न सकिन्छ, जबकि वास्तविक कारण नै अकल्पनीय उच्च .ण हो। जब ती सबै ठूला कम्पनीहरूले पहिले नै आफ्नो सेयरहरू किन्छन् र शेयर बजार क्र्यास हुन्छन्, हामीसँग एउटा संकट छ जुन नयाँ वित्तीय (ट्रेसेबल क्रिप्टो) प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ र उही ठूला कम्पनीहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा बनाउन सकिन्छ। त्यसो भए हामी साम्यवादी मोडेलमा छौं, जसका लागि पूँजीवाद स्मार्ट मार्ग वितरित
स्रोत लिङ्क सूची: ypsilon.org, telegraaf.nl, alt-market.com
पुँजीवाद र लज्जास्पद लोकतन्त्र, कम्युनिष्ट फासीवादको ढिलो मार्ग
छापा सुरु भयो? साइंसलाई एलेन बोर्स्ट / बार्ट भ्यान यू केसमा आधारित 2018 मा साइकोल्यान्सलाई पहिले नै हरित प्रकाश दिइयो
ट्याग: क्यामेरा, चीन, चीनियाँ। प्रान्त, communisme, विशेष, पुन: शिक्षा शिविरहरू, हङकङ, उइघुर, पुलिस राज्य, आतंकवाद, आतंकवाद
मार्टिन भिजल्याण्ड लेखे:
6 डिसेम्बर 2019 मा 14: 17
नियन्त्रित विरोधले जहिले पनि मानिसहरूलाई सुरक्षा जालमा आकर्षण गर्ने र त्यसपछि चीजहरू उडाउने उद्देश्य पूरा गर्दछ। अलेक्स जोन्सले साइककोसको परिभाषाको लागि कसरी जग दिन्छ भन्ने हेर्नुहोस्। यदि तपाईं "षडयन्त्र सिद्धान्तहरू" लाई पालना गर्नुहुन्छ भने तपाईं एलेक्स जोन्सलाई मनोवैज्ञानिक धन्यवाद हुनुहुन्छ।
6 डिसेम्बर 2019 मा 14: 27
हामीलाई पहिल्यै चेतावनी दिइएको थियो ... र अझै धेरैले यसलाई हेर्न चाहँदैनन्। अरूहरू प्रणाली को छेउमा काम गर्न छनौट गर्नुहोस् जसले गर्दा तिनीहरू सुरक्षित छन्।
5 जनवरी 2020 मा 20: 23
तानाशाहीको कुनै "सुरक्षित" पक्ष हुँदैन, शीर्षमा पनि होइन!
यो मनोवैज्ञानिकको नंगा नाच हो जो एक अर्काको अनुहारमा पर्दछन्।
त्यहाँ एउटा अनौठो मिथक पनि छ कि "सरकार" वा "राज्य" लाई "राज्य" पनि भनिन्छ जसले पुलिस राज्य चलाउँदछ। त्यो त्यस्तो चीज हो जुन 'त्यो सरकार' विश्वास गर्न चाहन्छ। सत्य यो हो कि यो 'ती' होइन, तर तपाईंको आफ्नै भान्जा, भाई वा बहिनी, छोरा वा छोरी, त्यो राम्रो कुकुरको साथ सडकको अन्त्यमा त्यो राम्रो परिवार छ।
ती श the्कास्पद मानिसहरू छन् जो अहिले टेलिभिजनमा युनानी स्वरमा कराइरहेका छन् कि 'उनीहरू' त्यस्तो कठिन समय बिताइरहेका छन्। तर एक पटक जब वर्दीमा फहराए र हतियारहरू राखिदिए, सबै कुरा आउँदछ र प्राकृतिक रूपमा निशस्त्र, अप्रशिक्षित नागरिकलाई दुर्व्यवहार गरिन्छ र मारिन्छ ... मुख्यतया शुद्ध अभिलाषाबाट बाहिर। "तिनीहरू" कम्तिमा 83 93 र अधिकतम 1919। को आईक्यूको लागि चयन गरिन्छन्। यो त्यो समूह हो जुनसँग 'सर्वश्रेष्ठ' (साइकोपैथिक) गुणहरू छन्। अमेरिकी सेनाले १ XNUMX १ since देखि यो तोपको मासुको लागि अनन्त खोजीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
समान रूपमा उल्लेखनीय तथ्य यो हो कि पुलिस सहित सबैले अझै पनि 'सडकमा निलो' कुरा गरिरहेछन्। केहि बर्ष पहिले 'तिनीहरूलाई' प्यारो कालो मा फिर्ता राखिएको थियो। स्पष्ट रूपमा, WWII पछि कालोलाई नीलो र replaced्गले प्रतिस्थापित गरिएको हो भनेर कसैलाई थाहा छैन र NSB को कुन सदस्य (zur Lippe B का मित्र) लाई त्यस्ता वर्दी आपूर्ति गर्न अनुमति दिइयो।
सम्पूर्ण रूपमा मेरो आश्चर्यको कुरा होइन तपाईंले यहूदी सर्कलबाट कहिले पनि केही सुन्नुहुन्न। त्यो "निलो" मुख्य रूपमा त्योसँग गर्नुपर्‍यो। राम्रा चोरहरू जसले आफूलाई आफूलाई 'जागरुक र सेवादार' भन्छन् त्यहाँ पेशाको समयमा नै 'उनीहरू' कालोमा लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका थिए जहाँ सम्भव भएसम्म उनीहरूको सेवाको लागि छापा मारेका थिए। यहूदीहरूले यसका बारेमा पुस्तकहरू लेख्न सक्छन्!
पछिल्ला शताब्दीमा १ 175.000.000 of,००,००० मानिस युद्धको परिणामस्वरूप मरे। थप रूपमा, 'तिनीहरू' २ 262.000.000२,००,००० को लागि जिम्मेवार छन् (https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=74) उनीहरूको आफ्नै 'सरकारहरू' मार्छन्। त्यो संख्या संयुक्त रूपमा सबै युद्धहरू भन्दा %०% बढी छ।
'तिनीहरूले' WW II बाट सिकेका छन्, तर न्युरेम्बरबर्ग ट्रायलहरू वास्तवमै उनीहरूलाई रोक्न चाहन्छन् ...। सामान आजकल बालाक्लावास लगाउँछ !! किनभने 'तिनीहरू' अन्यथा 'तिनीहरूको काम' गर्न सक्दैनन्।
तपाईंको छाती भिजेको बनाउनुहोस् 🙁
6 डिसेम्बर 2019 मा 15: 33
जिमी लाइ एक अरबपति समर्थक वा सीआईए समर्थित ह inक Kongमा अस्थिरता अभियान हो जसलाई भनिन्छ
समर्थक लोकतन्त्रको विरोध।
6 डिसेम्बर 2019 मा 19: 51
मार्टिन, संसारको कस्तो निराशावादी दृष्टिकोण हो, के तपाईले बुझ्नुहुन्न कि जलवायु परिवर्तनले आर्थिक प्रवृत्ति र आउने मन्दीमा योगदान पुर्‍याउँछ?
क्रिस्टीन लगार्डेले स्पष्ट रूपमा भने कि ईसीबीका अध्यक्षको रूपमा उनको कार्यकालमा मौसम परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसले केन्द्रीय बैंकले मौसममैत्री रुढीलाई समर्थन गर्न मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दियो।
7 डिसेम्बर 2019 मा 19: 10
साइकोल्यान्स पागल अप गर्न को लागी सिधा रातो झण्डा ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो डराउने / पदोन्नती अपरेशनको केस पनि हो।
8 डिसेम्बर 2019 मा 15: 52
म तपाईंसँग कुन बाटोमा हिंडिरहेको छु भनेर विस्तृत रूपमा सहमत गर्छु, तर देख्दिन कति पटक आउँदै गरेको मेगा संकट / क्र्यासको लागि दायाँ दोष दिन सकिन्छ। दायाँपट्टि, लगभग सबै सरकारहरु लाई वर्षौंको लागि बाहिर राखिएको छ, र यदि उनीहरु भित्र पस्ने व्यवस्था गर्छन् भने उनीहरुलाई नराम्रो लोकतान्त्रिक विरोधी चालका साथ चलाइन्छ (इटालीको लेगा; FPÖ अस्ट्रिया)। एएफडी, पीवीभी, एफभीडी, आरएन आदि .. सबै पार्टीहरू जुन स्थापना गरिएको आदेशले निन्दा गरेको छ र सत्ताबाट पछि फिर्ता बस्न बाध्य छ
त्यसोभए यदि ती जताततै विपक्षमा छन् भने कसरी सही दोष लगाउन सकिन्छ (अमेरिका बाहेक, र म बोरिस जोन्सनलाई बोलाउँदिन)? बरु म सोच्दछु कि स after्कट पछि नागरिकहरूले वर्तमान (बायाँ-उदारवादी, बायाँ-हरियो र बायाँ-क्रिश्चियन) शासकहरूलाई दोष दिन्छन्, र त्यसपछि दाहिने र राष्ट्रवादीलाई भोट दिन्छन्।
तपाईं एक परिदृश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं अन्ततः दायाँको साथ बस्नुहुनेछ। यो मिडियाद्वारा अझ बढि 'फ्रेमिंग' को साथ हुन सक्छ, र सम्भवतः 'झूटा झण्डा' घटनाहरू, जस्तै ठूलो तथाकथित 'दक्षिणपन्थी' आक्रमणहरू, उदाहरणका लागि, सरकारी केन्द्रहरू, AZCs, मस्जिदहरू, आदि। / प्रज्वलित - ठूला लोकप्रिय विद्रोहहरू उडाउन सकिन्छ, जुन तब क्रुद्ध गर्न र सर्वंकवादवाद र ईयू सुपरस्टेटलाई औचित्य बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
ठूलो प्रश्न यो हो कि के उनीहरूले चाहिएको परिणामलाई निम्त्याउने अशान्ति, डर र अराजकतालाई जोड्न सफल हुनेछन्। यो अनुमान गर्न असम्भव छ कि लाखौं मानिसहरूले कसरी प्रतिक्रिया देखाउने परिस्थितिमा उनीहरूको सबै आजीविका हिलदैछन्। के तिनीहरू वास्तवमा अहिलेको सम्भ्रान्त वर्गले प्रस्तुत गरेको मुक्तिलाई पक्रिराख्छन् कि छैनन् र सरकारी केन्द्रहरू आदि क्रुद्ध जनताले आक्रोशित भएका छन्? म अझै पक्का छुईन कि सबै कुरा विश्वव्यापीहरुको योजना अनुसारको आदर्श परिदृश्य अनुसार हुनेछ।
8 डिसेम्बर 2019 मा 17: 19
दायाँबाट फ्रेमिंग दायाँको त्यो ब्रान्डलाई झूटा कलंकहरूको रूपमा ती सबै विचारहरू जोड्ने द्वारा गरिन्छ। यस्तो गलत कलंक उदाहरणको लागि, 'जलवायु अस्वीकार' र 'षडयन्त्र चिन्तकहरू' हो।
मैले यो लेखमा यसलाई व्याख्या गरेः
यो लेख पढ्न पनि उपयोगी छ।
मलाई थाहा छ कि तपाईं अझै पनि दृढताका साथ आफ्नो साइटमा सहि राजनीतिलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, तर जहाँसम्म म चिन्तित छु कि त्यो स्पष्ट बायाँ-दायाँ बल क्षेत्रबाट हेर्नु महत्वपूर्ण छ। यदि - तपाईंले संकेत गरे अनुसार - तपाईंले मेरो पुस्तक पढ्नु भएको छ, तपाईं त्यसमा केही स्पष्ट हुनुभएको हुनुपर्दछ। केवल प्रश्न यो हो कि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि विपक्षको समन्वय गर्न सकिन्छ वा हुँदैन; संक्षेपमा भन्नुपर्दा, 'शक्ति' ले राजनीति, मिडिया र सोशल मिडियाको बाँया र दाँया दुबै प्रबन्ध गर्दछ।
8 डिसेम्बर 2019 मा 17: 23
बोरिस जोनसनलाई दायाँसँग जोड्न सकिन्छ यो अर्थमा कि ऊ स्टेज डि ब्रेक्सिटको लागि पुश गर्ने प्यादा हो; दायाँबाट spearheads को एक।
« इतिहास जान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 बुझ्नका लागि
बच्चाहरूलाई दबाब दिईएको ठूलो छ! »
कुल भ्रमण: 15.832.779
ट्रान्सजेंडर पुरुषले एक महिला शुक्राणु दातासँग एक गैर बाइनरी पार्टनरको बच्चालाई जन्म दिन्छ
के बोइंग aircraft 737-800०० (उडान PS752२) तल झार्ने ईरानी एन्टि-एयरक्राफ्ट प्रणाली ह्याक गरियो?
गृहयुद्धको पहिलो लक्षणहरू देखिन थालेको ट्रम्पको कपालमा कति समय भयो?
इरान, सोलेमानीमा भएको आक्रमण, पल्टाउनु र शूटिंग उडान PS752 सबै दृश्यमा सेट छन्?
पुनर्जन्म र वास्तविकताको चक्र हामीले यसलाई महसुस गरेका छौं
विश्लेषण गर्नुहोस् op के बोइंग aircraft 737-800०० (उडान PS752२) तल झार्ने ईरानी एन्टि-एयरक्राफ्ट प्रणाली ह्याक गरियो?
विल्फ्रेड बेकर op गृहयुद्धको पहिलो लक्षणहरू देखिन थालेको ट्रम्पको कपालमा कति समय भयो?
SandinG op के बोइंग aircraft 737-800०० (उडान PS752२) तल झार्ने ईरानी एन्टि-एयरक्राफ्ट प्रणाली ह्याक गरियो?